နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: အောကျတိုဘာ 22, 2018 In: AppointmentNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေး အတွင်းဝန် H.E. Mr. Vijay Gokhale အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ အိန်ဒိယနိုငျငံခွားရေး အတှငျးဝနျ H.E. Mr. Vijay Gokhale အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေး၊ ဒသေတှငျးနှငျ့ နိုငျငံတကာမကျြနှာစာတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျရေးနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျအပါအဝငျ မွနျမာနိုငျငံရှိ ဒသေမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးကိစ်စရပျမြားကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမှ ဌာနဆိုငျရာအကွီးအကဲမြားနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
ဒီလှိုင်းစာစောင်၊ အတွဲ(၇)၊ အမှတ်(၃၉)၊ ၂၂-၁၀-၂၀၁၈